Emirà Arabo Mitambatra · Novambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Emirà Arabo Mitambatra · Novambra, 2007
Tantara mikasika ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny Novambra, 2007
Emirà Arabo Mitambatra : Fisondrotan-karama 70%
Koety22 Novambra 2007
Ny mpiblaogy Bo7amo0od [Arabo] monina any Kaoeta [Koweit | Kuwait] dia mampita ny fanapahan-kevitr‘ireo Emirà Arabo Mitambatra ny hanondrotra 70% ny karaman'ireo mpiasam-panjakana manomboka amin'ny taona ho avy. Amira Al Hussaini
Emirà Arabo Mitambatra: Omeo Rariny Alexandre
Frantsa10 Novambra 2007
Iniana ampanginina sy afenina amin’ny pelipeli-pijerin’ny gazety eo an-toerana sy iraisampirenena amin’ny ankapobeny ny resaka fanolanana any amin’ny firenena Arabo. Fa nisy raharaha vao haingana izay nataon’ny famoaham-baovao iraisampirenena matoandahatsoratra no nihanahazo vahana tao amin’ny tontolombolongan’ny Emira Arabo Mitambatra. Tantara mampahonena no nahazo ity zazalahy Frantsay, antsoina hoe Alexandre Robert,...
Emirà Arabo Mitambatra : Nilatsaka ny orana tany Dobay !
Tontolo_iainana07 Novambra 2007
Ny mpiblaogy Seabee izay monina any Dobay dia tsindrian-daona be ihany mitatitra sy mametraka sary satria nilatsaka ny orana [erikerika] tany Dobay : « I can't remember the last time we had rain – sometime last winter obviously – but we had a little bit today. » « Tsy tsaroako intsony izay...